Turkish Airlines oo joojisay duulimaadyada Norway iyo Turkiga. - NorSom News
Turkish Airlines oo joojisay duulimaadyada Norway iyo Turkiga.
Sida uu qoray wargeyska ka warama arrimaha socdaalka diyaaradaha ee FLYSMART24, shirkada diyaarada Turkish Airlines ayaa joojisay duulimaadyada sagaal wadan oo ay kujirto Norway. Si looga hortago faafitaanka caabuqa Corona-virus(Covid-19).
Turkish Norway ayaa laga bilaabo saaka aroortii(Sabti) joojisay ama xayiraad kusoo rogtay dhamaan duulimaadyadii ay ku tagi jirtay, kagana soo bixi jiray dalalka Norway, Germany, Faransiiska, Spain, Denmark, Belgimka, Austrlia, Sweden iyo Holland. Waxeyna xayiraadaas socon doontaa ilaa 17-ka bisha April ee sanadkan.
Diyaarada Turkish Airlines ayaa sheegtay labo mar maalintii ka duuli jirtay Oslo.Soomaalida ugu badan ee u safarta Muqdisho ama guud ahaan Soomaaliya ayaana aad u adeegsato duulimaadka Turkish Airlines.
Previous articleNorway: Qofkii labaad oo xalay u geeriyooday Corona-Virus.
Next articleNorway oo xudeeda xirtay: Garoomada diyaaradaha iyo dekadaha oo dadka laga celin doono.